Dawladda Maraykanka Oo Ka Hadlay Xidhiidhka Dhexmaray Somaliland Iyo Taiwan | Aftahan News
Dawladda Maraykanka Oo Ka Hadlay Xidhiidhka Dhexmaray Somaliland Iyo Taiwan
Hargeysa, (Aftahannews)-Xafiiska Aqalka Cad u qaabilsan arrimaha Amniga Qaranka ayaa ammaanay galaangalka diblumaasiyadeed ee Tiawan ay ka bilowday Bariga Afrika gaar ahaan Somaliland.”
“Waa guul laga gaadhay xidhiidh diblumaasiyadeed ee naadirka ah ka dib markii ay Taiwan xidhiidh la yeelatay gobolka madaxa bannaan ee Somaliland”, ayaa lagu qoray wakaaladda wararka ee Mareykanka ee Associated Press.
Xidhiidhka xun ee kala dhexeeya Shiinaha ayaa sababay in dowladnimo ay waydo Taiwan oo ah maamul dimuquraadi ah oo xidhiidh la leh illaa 15 dal oo keli ah, kamana tirsano Qaramada Midoobeey.
Sidoo kale inta badan hay’adaha caalamiga ah waxay xidhiidh toos ah la leeyihiin Xukuumadda Beijing oo keli ah.
“Waa muhiim in la arko Taiwan oo sare u qaadeysa shaqadeeda xidhiidh ee Bariga Afrika, xilliga oo ay baahi badan jirto,” ayaa lagu qoray Twitter-ka Laanta Amniga Qaran ee Mareykanka.
“Taiwan waa saaxiib ku fiican caafimaadka, waxbarashada, iyo kaalmada farsamo, iyo waxyaabo kale oo badan! ayaa ka mid ahaa wixii lagu qoray barta NSC.
Farriintaas waxay daba socotay heshiiska dhowaan ay wada saxeexdeen Taiwan oo Shiinaha uu u aqoonsan yahay gobol dalkiisa ka tirsan iyo Jamhuuriyadda Iskeed Madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland.
Sidoo kale, Farriinta dowladda Mareykanka waxay imaaneysaa ka dib markii Shiinaha uu sheegay inuu diidan yahay xidhiidh diblumaasiyadeed ee Taiwan iyo Somaliland.
Sidoo kale, dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa iyana ka soo hor jeesatay xidhiidhka labada dhinac dhexmaray.
Somaliland ayaa dhankeeda sheegtay in Soomaaliya ay ka go’day bishii May ee sannadkii 1991, ka dib markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya.
In kastoo beesha caalamka aysan u aqoonsanayn dowlad ahaan, haddana waxay sameysatay maamul u gaar ah oo shaqeynaya, lacag iyo hannaan amni oo ay u madaxbannaan tahay.
Heshiiska Taiwan iyo Somaliland oo lagu dhawaaqay 1-dii bishan July, ayaa dhigaya in wakiillo ay isu soo kala magacaabaan labada dhinac oo Hargeysa iyo Taipei kala fadhiisan doona.
Marka xafiisyada la furo, labada dhinac waxay ka wada shaqeyndoonaan arrimo ay ka mid yihiin Beeraha, macdan qodidda, kalluumeysiga, tamarta, caafimaadka, waxbarashada iyo horumarinta Macluumaadka Teknolojiyadda, sida uu sheegay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Taiwan Joseph Wu.
Wuxuu intaa ku daray in “labada dowladood ay ku heshiiyeen billaabidda xidhiidh ku saleysan saaxiibtinimo iyo wadaagidda qiyamka ay ka mideysan yihiin ee ah xoriyadda, dimuquraadiyadda, cadaaladda iyo sharciga iyo kala dambeynta”.
Wu iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland, Yasiin Maxamuud, ayaa wada saxeexay heshiiska laba geesoodka ah oo ka dhacay magaalada Taipei, bishii February ee sannadkan, sida ay warbaahinta Mareykanka qorayaan.
Taiwan waxay sannadkastaa bixisaa waxbarasho lacag la’aan ah oo ay siiso 3.9 milyan oo qof oo daafaha caalamka ka kala yimaada.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha, Zhao Lijian, ayaa sheegay in “dowladdiisa ay sii wadeyso xidhiidh ay la leedahay Soomaaliya”.
Wuxuu Taiwan ku eedeeyay “dhibaateynta madaxbannaanida Soomaaliya iyo sharafta dhuleed”.